Ogaden News Agency (ONA) – Baarlamaanka Dalka Masar oo Ansxiiyay Xeerar Cusub.
Baarlamaanka Dalka Masar oo Ansxiiyay Xeerar Cusub.
Posted by Wariye Qaran	/ July 18, 2018
Baarlamaanka dalka Masar ayaa ansixiyay dhowr qodob oo sharci ah oo uu ku jiro xeer u ogolaanaya dadka ajnabiga ah in ay heli karaan jinsiyadda Masar haddii ay dhigtaan bankiyada dalkaasi lacag dhan $400,000 afar boqol oo kun oo dollar.
Sharcigan ayaa dhigaya in qofka ajnabiga ah uu fursad u helayo inuu noqdo Masri haddii uu akownkiisa bankiyada Masar uu muddo shan sano ah uu dhigto 7 milyan oo giniga Masar ah isla markaana uu muddaaasi daganaato Masar.
Xeerkan oo u baahan inuu saxiixo madaxweyne Abdelfattah Al-Sissi ayaa qeylo-dhaan xoog leh ka dhex dhaliyay gudaha baarlamaanka iyo sidoo kale baraha bulshadu ay ku kulanto ee Social Media. Haitham Al-Hariri oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa ku eedeeyay dowladda in ay iibineyso dhalashada Masar si ay usoo jiidato maalgeliyaasha ajnabiga ah.
Sidoo kale baarlamaanka Masar ayaa shalay ansixiyay xeer diidaya in aanan wax maxkamad ah lasoo taagi karin saraakiisha sare ee ciidanka dalkaasi gaar ahaan kuwii hagayay ciidamada qalalaasihi dalkaasi ka dhacay sannadki 2013-ki ee lagu afganbiyay madaxweynihi hore Dr. Maxamad Morsi.
Muddadaasi ayaa waxaa la dilay boqolaal ruux oo ka mudaaharaadayay afganbigi xukunka looga tuuray madaxwaynihii sida sharciga ah loo doortay Dr. Maxamad Mursi oo tan iyo xilligaas jeelka ku jira.